Single Row Four Points Bhora Slewing Kubereka Fekitori - China Imwe Row China Pfundo Bhora Slewing Kubereka Vagadziri, Vatengesi
rinorema basa turntable mabheyaringi neokunze giya slewing mhete
Slewing inotakura giya yayo chaiyo giredhi inofanirwa kuve iri pakati pe7 kusvika 11, iyo inosarudzira kutsetseka kweiyo slewing inotakura dhiraivha, mutoro wekuparadzira kufanana uye kutapurirana kwakaringana. Iyo yakakwira iyo slewing inotakura giya chaiyo, iyo inonyanya kusimbisa iyo mesh zino pamusoro pehukama nzvimbo, kuitira kuti ruzha kukosha kuderedzwa, iko kutsetseka kwekushanda kunovandudzwa.
Yakakwirira chaiyo slewing mhete inotakura yeNucleic acid michina
Iyo yekushandisa renji yekutsvaira mabheyari iri kuve yakafara uye yakafara, uye iwo zvino ave kushandiswa zvakanyanya mune zvekurapa zvekushandisa. Pakati pavo, gamma banga, CT muchina, Nucleic acid michina uye zvimwe zvekurapa zvishandiso zvinoshandisa slewing mabhegi.
Yakanakisa mhando yekucheka mhete inotakura yekutengesa inopisa otomatiki nucleic acid extractor
Slewing kubereka aigona kushandisa kuti otomatiki nucleic asidhi inofashaira sechinhu turntable chikwata. Iyo otomatiki nucleic acid extractor chishandiso chekutora nekuchenesa nucleic acid kuburikidza nemagineti bead nzira. Uye mukana weiyo turntable dhizaini idiki nzvimbo inogarwa nechiridzwa, kugadzikana kushanda, yakachengeteka uye yakavimbika.
Yemukati zino kusona inotakura imwechete mutsara bhora 4-poindi inosangana 013 akateedzana
1. Fekitori yekupa Inner giya yakauraya inobereka
Kurwisa 2.Dust, yakareba nguva yekuchengetedza
3.Makwikwi kwazvo mutengo kuti iwe ubate mutengi wako!
Kwete giya slewing mhete inotakura 010 dzakateedzana nemakwikwi mutengo
CCS & BV zviyero
Top mugadziri Slewing mhete inobereka
External giya chete mutsara bhora mana poindi kuonana 011 akateedzana slewing kubereka
Isu tiri vepamusoro kugadzira kwese kuruka mhete.
Fekitori yedu yapfuura ISO9001: 2015. Nemhando imwecheteyo seimwe mhando inozivikanwa.
Kana iwe ukashanda nesu, unogona kuchengetedza yako mutengo nekuda kwemutengo wedu unokwikwidza kwazvo.
Yakakwira mhando 4 poindi yekubata bhora turntable inobereka yemhepo turbines
Mhepo turbines rudzi rwegirini uye simba rakasimba. Iyo yaw mabheyari uye blade mabheyari atinogadzira nekugadzira akakosha zvikamu zvemagetsi turbines jenareta, anobatsira iwo ma rotor mashizha kutenderera zviri nyore mumhepo uye nekushandura kinetic simba mumagetsi emagetsi.
Isu tinoshandisa yakakosha yekuisa chisimbiso sisitimu inopa zvizere zvakasungwa mabheyari uye isu zvakare tinokurudzira yakasanganiswa mabheyari ane lubrication system.
Akanakisa mutengo 4 poindi angular kuonana bhora turntable slewing kubereka | XZWD
Slewing bearings anoshandiswa zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana siyana, kusanganisira meinjiniya, michina yekuvaka, indasitiri yegungwa, gungano rinorema zvichingodaro. Nekuenderera mberi kwekuvandudza michina yekuvaka, iko kutsetseka uye mutoro kugona kwepinion drive uye yekucheka mhete zvine zvakakwirira zvinodiwa kumuchina wekuvaka.
4 poindi angular kuonana bhora turntable slewing kubereka | XZWD
Iyo imwechete mutsara mana poindi bhora kuonana slewing mhete inotakura muenzaniso weakanyanya mhando mwero uyo une Kukwirira kuomarara uye simba, yakaderera kukweshera uye kwenguva refu yebasa. Iyo inogadzirwa uchishandisa chaiyo machining, yakakwira inodzorwa kuomesa maitiro, kuongororwa kwakaringana mukuita uye zvinhu zvinokodzera.
Saizi yebhora inowanzo sarudzwa nekuremekedza axial mutoro uye radial mutoro unouya pane iyo Slewing mhete giya uye famba inobereka.
XZWD rezuva simba chizvarwa imwe mutsara bhora slewing kubereka
Slewing mhete yakakosha kwazvo zvikamu muinjiniya michina, inogona kudzora mashandiro emuchina.
Sarudzo lubricant nokungwarira ichawedzera hupenyu hwehupenyu hweyekucheka ring.In kuitira kudzivirira iyo slewing mhete uchishandisa matambudziko mune ramangwana, ndapota chengeta zvakanaka kugadziriswa.
Usati waita mhete yekusiya fekitori, mamwe mafuta anofanirwa kunge ari munzira yeyekucheka mhete .Pamberi pekucheresa rin'i basa, ndapota chinja girisi uye nekuzadza mafuta akakwana maererano nemamiriro ako ekushanda akasiyana, unogona kusarudza NO.2 EP mafuta
XZWD Imwe Row Yakayambuka Roller Slewing Kubereka Ring Tunnel Inoshoreka Machina
Isu tinokudziridza uye tinogadzira zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvevatengi vanobva akasiyana maindasitiri. Semunhu ane ruzivo mudiwa, isu tinozvirumbidza yakakura ruzivo-uye hunyanzvi uye gadzirisa matunhu edu kune chaiwo mafomu. Semutengi iwe unobatsirwa kubva pamhinduro dzakagadziriswa pamwe nezvinowirirana zvinhu